China, November 15, 2007 China, November 15, 2007 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ini ndakatenga duraini NavyVets.com. Ini ndakanga ndisina chero nguva yekunyatso shanda pakuvaka saiti, saka ndakaisa domeini kumusoro Sedo.com kuona kana paive nekufarira mairi uye kuti uwane zvishoma zvemadhora ekushambadza. Zvishoma zvishoma hazvireve chinhu… kwezviuru zvehits mwedzi wega, ini ndanga ndichingowana peni pano neapo.
Nemagariro pasocial network achiwedzera, ndakatanga kuyedza mapaketi akasiyana-siyana ekushamwaridzana nevanhu andingaisa pane saiti. Ndakatakura zvinhu Elgg asi yanga isiri iyo yakapusa pasuru yekugadzirisa uye kutanga kushanda.
Panenge panguva iyoyo, ndakatanga kushandira chiratidzo chesaiti. Ini ndakanyatsotora chiratidzo cheUSN uye, ndichishandisa Illustrator, ndakaparadzanisa matete ese ndokuwedzera chimwe chikamu.
Mazuva mashoma apfuura, ini ndakatanga kutarisa Ning. Kekutanga nguva pandakaona Ning makore mashoma apfuura yaive pakutanga Mashup Camp. Zvainakidza… software yaibvumidza iwe kunyora kodhi yekodhi pamusoro pechikuva chavo ... kwete chaizvo plugin, asi zvakanyanya kusimba.
Ning yakavaka yakanakisa social network iri nyore kuvhura kunze kwebhokisi! Muchokwadi, zvakanditorera nguva yakareba kuti ndivake logo pane zvaitora kuti pasocial network iite uye imhanye!
Ini ndakasarudza kupinda mune imwe sarudzo yepamberi ala mapaiti - dura rega, kushambadza kwangu, nekubvisa zvese Ning Bling. Ndinofunga zviri kutaridzika zvakanaka! Zvino ini ndinongoda kutsvaga mamwe maVets anofarira! Ini ndinofunga inyaya yakanaka inotonhorera - a Navy Veteran social network… Muridzi uye nekushanda neNavy Veteran!
Mbudzi 15, 2007 na1: 10 PM
Doug, ruzivo rwakanaka, ndinoziva vanhu vanoverengeka vari kuita mamwe madiki masocial network uye vanozogovana chako post navo!
Mbudzi 15, 2007 na8: 18 PM
Ini ndakanyatsoshamisika nekureruka kwaive kushandisa, JD! Ini ndinofunga marongero anogona kushandisa imwezve rubatsiro, asi ichasvika ipapo!
Iyo saiti yakawana iko kwekutanga kunyoresa manheru ano! Woohoo!
Mbudzi 15, 2007 na2: 03 PM
Ndinofara kuona kuti watanga chimwe chinhu nedomeini (rakakura dura!). Ndanga ndichishandisa Ning neIndyLance kwenguva pfupi uye zvave zvakanaka kusvika parizvino. Ini handina kukanganisa zvakanyanya nezvose zvapamberi maficha, asi kugona kutarisa imwe yekodhi yako pane yakachengetwa, yemahara sevhisi haiwanzoitika.
Ini handina kuwana nguva yekutarisa iyo Ning API kana mikana neGoogle Open Open. Ah, yangu isingagumi ku-ita runyorwa.
Mbudzi 15, 2007 na8: 14 PM
Ngatinyatso kugoverana zvinyorwa kana tiine mukana, Noa. Ndinewe - rondedzero yangu yakareba kupfuura kugona kwangu kupedzisa mabasa!
Mbudzi 15, 2007 na7: 46 PM
Akanaka munhu ane nyasha, unomborara here?!
Zvakare imwe nifty, yakakosha chirongwa kubva kuna Doug-meister. Nhanho yakanaka nayo!
Mbudzi 15, 2007 na8: 13 PM
Ini chaizvo ndakapunzika kazhinji pazuva nhasi - ndine huro hwakashata huro. Ndicho chiratidzo chekutanga chekuti ndiri kushanda maawa akawandisa. Ini ndichawana hope dzakanaka dzehusiku manheru uye ndodzoka pairi mangwanani!
Mbudzi 16, 2007 na8: 08 PM
Izvi zvakanaka chaizvo. Ndine pfungwa dzinopfuura dzinoverengeka dzemasocial network, uye ndanzwa nezveNing asi handisati ndambozviongorora. Ndinogona kudaro. Ndinovimba izvi zvinotanga kusimudzira iwe.
Iyo Huru mbeveve Marketer
Mbudzi 16, 2007 na11: 26 PM
Wow! Yakapinza saiti! Ndakanga ndanzwa nezveNing asi ndisingazive kuti yaive nesimba rakadii. Ini zvechokwadi ndichatarisa mune izvi. Ndatenda!
Nov 19, 2007 pa4: 21AM
Ndine urombo iwe unonzwa kuti wanga uine matambudziko naElgg, ndingafarire kuziva kuti ndepapi chaizvo pawakawana zvakaoma kumisikidza. Zvinhu zviri kukurumidza kuchinja naElgg, semuenzaniso kuburitswa kunotevera, kunotarisirwa muna Zvita, kunosanganisira inosimudzira inosimudza. Uyezve, iyo Elgg yekuvandudza nharaunda ine hutano nevanhu vazhinji ipeople vanoda kubatsira. Nekudaro, kana iwe ukazowana kudiwa kwekupa nhengo dzako mwero wepamusoro wekutonga pakavanzika, kana kutanga kunzwa kusagadzikana nezvekambani imwe inochengeta data rako rese, tinokugamuchira kuti umire zvakare paElgg.org 😉
Nhanho yakanaka neprojekti iyi!